महिला फुटबल खेलाडीको चाहना : सोच फराकिलो बनोस - खेलकुद | Kantipur TV HD
महिला फुटबल खेलाडीको चाहना : सोच फराकिलो बनोस
नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमको सफलताले नयाँ पुस्तालाई निकै हौसाएको छ । छोरीमान्छेले पनि फुटबल खेल्छन र ? भन्ने टिप्पणीसँगै आफ्नो करियर अघि बढाएका महिला खेलाडीको उत्कृष्ट प्रदर्शनले उनीहरु स्वंय पनि निकै आशावादी भएका छन् । उनीहरु चाहन्छन्, नेपालमा पहिलो पटक भइरहेको साफ च्याम्पियनसिपले महिला खेलाडीलाइ हेर्ने एन्फाको सोच पनि फराकिलो बनोस् ।
विराटनरगमा जारी साफ महिला च्याम्पियनसिप हेर्न सहिद रंगशाला पुगेकी दर्शक हुन उनी । उनले पहिलो पटक मैदानमा पुगेर महिला फुटबल हेरेकी हुन् । उनको जस्तै अरुको पनि मतिष्कबाट पुरुष र महिला खेलाडीलाई हेर्ने दुई फरक दृष्टिकोण परिवर्तन भएको हेर्न चाहन्छन महिला खेलाडी । राष्ट्रिय महिला टिमका प्राय सबै खेलाडी नेपालको ग्रामिण क्षेत्रबाट आएका हुन जहाँ अहिले पनि महिलाले फुटबल खेल्नु नै बहसको विषय बन्छ । नेपाली महिला फुटबल खेलाडीले आफुलाई पढे लेखेको बुद्धिमान सम्झिने गाँउको त के कुरा ? सरहका पढेलेखेका र देशविदेश देखेका दर्शकले पनि रंगशालामा महिला खेलाडी माथि भद्दा शब्दहरु प्रयोग गरिरेहका सुनिन्छन् । अझै पनि महिला खेलाडीले पाउनुपर्ने सम्मान नेपाली समाजबाट पाइरहेका छैनन् । समान पारिश्रमिक, सेवा सुविधा र लगानीमा समेत हेपिएका महिला खेलाडीको आश छ अब समाज मात्र होइन अखिल नेपाल फुटबल संघले पनि विभेद गर्ने छैन । कुनैपनि खेलले अघि बढ्ने सुनौलो अवसर एक पटक पाउँछ । अहिले महिला फुटबल त्यहि अवसरको नजिक छ । यस अवसरलाई सम्बन्धित निकायले कसरी सदुपयोग गर्छ त्यसले नै नेपाली महिला फुटबलको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।